एनआरएनए युके निर्वाचनमा बुथ कब्जा गरी ५०० मत एकछापे खसालिएको छ : नारायण गाउँले - VOICE OF NEPAL
३० भाद्र २०७६, सोमबार १०:४०
712 ??? ???????
एनआरएनए युकेको निर्वाचनपछि रोकिएको मतगणनाबारे धेरैले जिज्ञासा राख्नुभएकोले यो पोस्ट गर्दै छु: नारायण गाउँले
१-निर्वाचनमा १३ वटा बुथ थिए । प्रायः सबै ठाउँमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । झन्डै ९ हजार मत खसेको बताइएको थियो । यो उल्लेख्य र उत्साहजनक मतदान थियो । अध्यक्ष प्रत्याशी शेर सुनार र पुनम गुरुङले प्यानल नै बनाएर लडेका थिए ।
२-बेजिंगस्टोक स्थित बुथमा निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष नभएको उजुरी शेर सुनार पक्षबाट निर्वाचन समितिमा परेको थियो । स्वयंसेवकहरूका नाममा जथाभावी पास बाँडिएको र तिनले धमाधम अरूको मतपत्र समेत एकछापे भर्दै गरेको देखिएपछि अध्यक्ष प्रत्याशी शेर सुनारले मतदान चलिरहँदा नै त्यसलाई रोक्न निवेदन दिएका थिए । तर निर्वाचन आयुक्तले त्यस्तो काम ‘रोकिएको’ बताए पनि निर्वाचन रोकिएन ।
३-मतगणना सुरु गर्नुअघि त्यो बुथबारे विवाद भएपछि पूनम गुरुङ पक्षले ह्यारो र अल्डरसट बुथमा शेर सुनार पक्षले धाँधली गरेको उजुरी निर्वाचन समितिलाई बुझाएको थियो । अल्डरसट बुथमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डमर घले आफै थिए भने ह्यारोको बुथमा अन्तिमसम्मैं आइसिसी सदस्यहरूले अनुगम गरेका थिए । तिनले के रिपोर्ट दिए र त्यहाँ अनियमितता भएको आरोप लाग्यो भन्ने थाहा भएन ।
४-शेर सुनार पक्षले आफूले कुनै अनियमितता नगरेको र विवाद भए ती बुथमा समेत पुनः निर्वाचनमा जान सकिने तर बेजिंगस्टोकमा जसरी पनि पुनः निर्वाचन हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो ।
५-बेजिंगस्टोकबारे निर्णय नभई मतगणना सुरु नगर्न शेर सुनार पक्षको जिकिर रह्यो । निर्वाचन समितिले यथास्थितिमा मतगणना गर्न नसकिने र पुनः निर्वाचन पनि गर्न नसकिने भन्दै भोलि बिहान सामूहिक राजीनामा गर्ने बतायो । तर यो धम्की मात्रै रहेछ । भोलिपल्ट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आफैले ज्यान दिने तर मतगणना गर्ने अर्को धम्की दिए । कसले ज्यान लिन खोजेको हो भन्ने स्पष्ट भएन ।
६-बेजिंगस्टोक बुथ पूनम गुरुङकै क्षेत्र भएको र स्वच्छ निर्वाचन भए पनि त्यहाँ पूनम गुरुङकै पक्षमा मत झर्ने पक्का थियो । त्यसैले पनि त्यहाँ भएको अनियमिततामा गुरुङ्को प्रत्यक्ष हात थियो भन्न गाह्रो छ । तर त्यहाँ पाँच सयभन्दा बढ़ी मत एकछापे खसाल्दा प्यानलका अन्यलाई भने ‘एडभान्टेज’ मिल्ने देखिन्छ । मतपत्र धेरै लामो भएकाले अन्यत्र प्यानलमा खास मत नझरेको अनुमान छ । एनआरएनए युकेका अध्यक्ष योग फगामी पनि त्यहीँका हुन् र उनी पनि अहिले उम्मेदवार छन् ।
७-अध्यक्ष योग फगामीले निर्वाचन समितिको संवेदनशील डेटा अपचलन गरेको र फोटो खिचेर बाँडेकोमा समिति अध्यक्ष डमर घलेले सचेत गराउनु परेको थियो ।
८-प्राविधिक त्रुटि हो या नियत हो, पछि थाहा होला, तर पैसा र फारम बुझाएका सयौंले सदस्यता पाएनन् र पाएकाको नाम पनि अन्तिम समयमा बुथबाट हटाएको पाइयो । उपाध्यक्ष उम्मेदवार कमल पौडेलकै श्रीमतीको नाम सदस्यता सूचीबाट हटेको देखियो । धेरैले निर्वाचन समितिलाई ईमेल गरे तर जबाफ पाएनन् । ती विषयमा अब आउने कार्यसमितिले छानबिन र न्याय गर्ला नै ।
९-एनआरएनए कार्ड पनि जथाभावी समूहलाई बाँडिएको पाइयो । सबैले कार्ड पाएनन् । कार्ड बनाउनकै लागि २० हजार पाउण्डभन्दा बढ़ी खर्च भएको देखिएको छ । र दुःखको कुरो, यो कार्ड एनआरएनएको सेन्ट्रल सिस्टम (MIS) मार्फ़त् नबनाई यहीँ लोकल्ली बनाइएकाले यस मान्यता र मूल्य एकदम कम छ । फेरि अर्को कार्ड बनाउँदा अर्को आर्थिक बोझ थपिन्छ ।
१०-माथिका तीन बूँदा जानकारीका निम्ति मात्रै हो । चुनाब भइसकेपछि निर्णय आउनुपर्छ । सबैभन्दा उत्तम विवादित बुथमा पुनः निर्वाचन गर्नु र अन्य बुथको मत गन्नु नै हुन्छ । झन्डै नौ हजार मान्छेको अभिमत बन्धक बन्नु हुन्न । निर्वाचन समितिले उचित निर्णय लिन सक्नुपर्छ !
मैले सुरुदेखि नै अनलाइन सदस्यताको कुरा उठाउँदै आएको थिएँ । भएको निःशुल्क सिस्टम (MIS) प्रयोग गरेर अनलाइन सदस्यता दर्तादेखि निर्वाचनसम्म गर्न सकिन्थ्यो । त्यो न्यून ख़र्चमा सम्पन्न हुन्थ्यो । तर अध्यक्षज्यूले भएको वेवसाइट (अझै पनि छ । प्रयोगविहीन छ । www.uknrna.org) बाट सबै डेटा हटाएर दश लाख रुपियाँ खर्चेर विना प्रतिष्पर्धा अर्को गुणस्तरहीन वेवसाइट बनाउनुभएको छ । त्यसले चौध हजारमध्ये तीन सयको मात्र अनलाइन दर्ता गर्न सक्यो । अहिले झन्डै चालीस हजार पाउण्ड चुनाबमा खर्च भएको अनुमान छ । र दुःख लाग्दो कुरो के छ भने फेरि अर्को लाखौ खर्च गरेर १४ हजार सदस्यको विवरण पुरानो वेबसाइटमा हाल्नै पर्ने छ । मैले जितें भने यस विषयमा खबरदारी गर्ने नै छु । हारें भने पनि जित्नेले यो खोज्लान् नै ।
जम्मा चार हजार सदस्य हुँदा त मुछेन्द्र गुरूंगको कार्यसमितिले चुनाब गरेर ३० हजार पाउण्ड भन्दा बढ़ी हाम्रो कार्यसमितिलाई दिएको थियो । हामीले चौध हजार सदस्य बनाएर र लाखौं उठाएर पनि आगामी कार्यसमितिलाई उल्टो ऋण दिने सम्भावना छ ।